အိမ်မှာ ၊ ဆိုင်မှာ လာဘ် တိတ် နေ လျှင် – Let Pan Daily
ဆရာအိမ်မှာ လာဘ်တိတ် နေလား မသိဘူးငွေမဝင်တာကြာပြီ လုပ်အားခတွေ ကမရ သူများဆီ ချေးထားတွေကမရနဲ့ အိမ်မှာငွေမမြင်ရတာကို ကြာပါပြီစသောသူတွေ အတွက်တချို့လည်း အိမ်ကကျက်သရေမရှိသလို ဖြစ်နေစသောသူတွေအတွက်ဆိုင်တွေ မှာဆိုလာဘ်တိတ် သွားတာနည့် ရောင်းအား တခါထဲထိုးကျသွားပြီးငွေဝင်မည့်အကြောင်းကံများပိတ်သွားလေတော့သည် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်စျေးရောင်းသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားလုပ်ငန်း လုပ်နေသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာဘ်တိတ်လာဘ်ပိတ်သွားသူတွေ အတွက် မိမိ အိမ်က. ဘုရားခန်းမှာအိုးတစ်လုံး သက်သက်ဖြင့်မိမိအမြစ်အညွန့်ပန်းတစ်မျိုး ထိုးပူဇော်ထားပါ မိမိမွေးနေ့၆နာရီ ၇ ခွဲ အတွင်းပူဇော်ထားပါ။
ငွေဖလား တစ်ခွက် ဝယ်ထားပါပြီးရေထည့် ရွှေထည့် စိမ်ထားပါငွေမတ်ဆေ့ ရှိလျှင် ငွေမတ်ဆေ့ ရော စိမ်ထားပါ ငွေဖလား မရှိလျှင် အခြား ခွက်ကြီးကြီးထဲငွေမတ်ဆေ့ရွှေစိမ်ထား ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ထိုစိမ်ထား တဲ့ ရေထဲနံသာဖြူ နံသာနီသနပ်ခါး တို့သွေး ထည့်ပါ အခြားအမွေးအကြိုင် လည်ထည့်၍ ရပါသည် ပြီးလျှင် လက်နှစ်ဖက် ဖြင့် ကိုင်ကာမြတ်စွာဘုရားစင်ရှေ့၌ ပင်သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာ (၁၀၈) ခေါက် ရွတ်ဖက်ပူဇော်ပါ။ထိုမျှ မက ရွတ်ဖက် ပူဇော်နိူင်လျှင်ကောင်းပါသည် ထိုရွှေရည် ငွေရည် နံသာရေ. နေ့စဉ်မစိမ်အားလျှင်မိမိမွေးနေ့ မှာများများ စိမ်ထားပါတစ်ပတ်စာ နှစ်ပတ်စာရအောင် စိမ်ထားပြီး ဗူးသန်သန့်ထဲထည့်၍ဘုရားဆောင်၌ထားပါ
။ပြီးထို နံသာရေ. ရွှေရည် ငွေရည် စိမ်ထားတဲ့ရေကို ကြေးဖလားငွေဖလားထဲထည့်ကာမိမိဘုရားမှာလှူထားသောစောစောက. အမြစ်အညွန့် ပန်းဖြင့် နေ့စဉ်မနက်စောစောပက်ဖျန်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သဗ္ဗမင်္ဂင်္လာ ဂါထာတော်ကြီးရွတ်ဖက်၍ ပက်ဖျန်းပါ မြတ်စွာ ဘုရားကိုလည် မနက်စောစော မပက်ဖျန်းခင်ဝ အမွှေးတိုင်ဖြင့် ပူဇော် ထားပါလေမိမိဆိုင်ခန်းရုံးခန်းအလုပ်ခန်းတွေ မှာလည်ပက်ဖျန်းနိူင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘုရားလှူထားတဲ့ မိမိအမြစ်ညွန့် ပန်း မညိုးပါစေနှင့်ဘုရား ဆောင်ပက်ဖျန်းပြီးအမြစ်ညွန့်ပန်း ဘုရားအိုး၌ပင်ထပ်မံထိုးထားပါ။
မိမိအမြစ်အညွန့်ပန်းရွှေရည်ငွေရည် စိမ်ထားတဲ့နံသာရေ. တို့ဖြင့် ပူဇော်မည် ဆိုလျှင်ဘုရားဆောင်ကိုသန့်သန့် ရှင်းရှင်းလုပ်ထားပါသန်ရှင်းစင်ကြယ်နေပါစေ ဘုရားဆောင်က။မိမိ အလုပ်ခန်း စျေးဆိုင်တို့. ထိုရေဖြင့်ပက်ဖျန်မည် ဆိုလျှင်မိမိ အမြစ်အညွန့် ပန်းသက်သက် ဝယ်၍ သွားပါ ဘုရားဆောင်က. ယူမသွားပါနှင့်ပက်ဖျန်းတဲ့ အခါ၌လည် သဗ္ဗမင်္ဂလာ ဂါထာတော်ကြီးမပျက်ရွတ်ဆိုရပါမည်။ရွှေရည်ငွေရည် နံသာရေ စိမ်ထားတဲ့ ရေကိုလည်းသဗ္ဗမင်္ဂလာ ဂါထာတော်ကြီးဖြင့် ၁၀၈ ခေါက် အနည်းဆုံးရွတ်ဖက် မန်းမူတ် ထားပါ။
ကျက်သရေရှိ စွာ သဗ ္ဗမင်္ဂလာ ဂါထာတော်ကြီး
ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော၊ ရတ္တိမာဘာတိ စန္ဒိမာ။သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ၊ စျာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံ၊ ဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (တာဒိသံ တေဇ သမ္ပန္နံ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ သာဒရံ။ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန၊ မဟာလာဘော သုခံ ဘဝေ။)
အမြစ်အညွန့်. ပန်းများ – တနင်္ဂနွေသားသမီး နွယ်သာကီ ပန်း။တနင်္လာသားသမီး သြဇာ ညွန့်။ အင်္ဂါသားသမှး ခရေ ညွန့်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး စံပယ်ညွန့် ပန်းခက်။ကြာသပတေးသားသမီး လောက်သေညွန့်။သောကြာသားသမီး ပိတောက်ညွန့်
စနေသားသမီး သစ်အယ်/ သို့မဟုက် အုန်းညွန့်ဖြင့် ပြူလုပ်ပါ အညွန့်အရေအတွက် မထားပါ မိမိ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိူင်ပါသည်။ ၇ ရက်သားသမီး အပေါင်း မိမိ အမြစ်အညွန့် ပန်း ရွှေရည်ငွေရည် နံသာရေ စိမ်ထားတဲ့ရေတို့ဖြင့် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာရွတ်ဖက်ရသော အကျိုးအာနိသင်တို့ကြောင့်ကျက်သရေ မင်္ဂလာ အခါခါ ဖြစ်၍ အလုပ်အကိူင် လာဘ်လာဘ. များ ပွင့်လန်းကာ ငွေကြေးချမ်သာစီးပွား ဖြစ်ထွန်းကြပါစေဗျာ။